Indlela u-Eli Whitney angene ngayo iCottin Gin
U-Eli Whitney wayengumqambi we-cotton gin kunye novulindlela ekuveliseni umthamo wekotoni. UWhitney wazalelwa eWestboro, eMassachusetts ngoDisemba 8, 1765, waza wafa ngoJanuwari 8, 1825. Waphumelela kwi-Yale College ngo-1792. Ngo-Apreli 1793, u-Whitney wayilungiselele kwaye wakha i-cotton gin, umatshini owazenzekelayo ukwahlukana kwe-cottonse ukusuka kwi-short-staple fiber fiber.
Izibonelelo zeCotton Gin kaEli Whitney
Ukuqulunqwa kuka-Eli Whitney kwipotton gin yaguqula imboni yekotoni e-United States.
Ngaphambi kokuveliswa kwakhe, ukotini lwezolimo wawufuna amakhulu amawaka-ndoda ukuba ahlule i-cottoni kwii-cotton fibers. Iinkqubo ezilula zokususa imbewu ziye zadlulayo ngeenkulungwane, nangona kunjalo, u-Eli Whitney wakhetha inkqubo yokuhlukanisa imbewu. Umatshini wakhe unokuvelisa ama-pounds amahlanu eekotoni ahlambulukileyo imihla ngemihla, ukwenza ukuveliswa kwekotoni kunenzuzo kumazwe asezantsi.
U-Eli Whitney akazange akwazi ukuzuza kwizinto zakhe ngenxa yokuba umbane wakhe wabonakala kwaye ulunge lwakhe lobunikazi be-1794 lwe-cotton gin alukwazanga ukugcinwa enkundleni de kube ngu-1807. U-Whitney wayengenakuyeka abanye ukuba bakopishe baze bathengise i-cotton gin design.
U-Eli Whitney kunye nomlingani wakhe wezo shishino uPineas Miller uye wagqiba ekubeni angene ebhizinisini. Benza ezininzi iimveliso zekoton ngokusemandleni kwaye bazifake kwiiGeorgia nakumazwe asezantsi. Baye bahlawulisa amafama umrhumo ongaqhelekanga wokwenza i-ginning kubo, i-sibini-ntlanu yeenzuzo ezihlawulwe ngekotoni ngokwayo.
Iikopi zeCotton Gin
Yaye ke, zonke iingxaki zabo zaqala. Abalimi baseGeorgia babenqwenela ukuba baye kwi-cotton gins apho bekufuneka bahlawule oko babecinga njengerhafu enkulu. Kunoko abatshali bezityalo baqalisa ukwenza iinguqu zabo ze-Eli Whitney kunye nokubiza ukuba "izinto ezintsha".
UFineas Miller walethe iingubo ezixabisekileyo kubanikazi beenguqulelo ezigwenywe kodwa ngenxa yecala lokubhaliweyo kwisenzo se-patent ka-1793, abazange bakwazi ukuphumelela izibophelelo zange-1800, xa umthetho wawushintshiwe.
Ukuxhatshaza ukwenza inzuzo kunye nokuxhonywa kwiimfazwe zomthetho, amaqabane ekugqibeleni avumelana neelayisenisi kwixabiso elifanelekileyo. Ngowe-1802, iSouth Carolina yavuma ukuthenga ilungelo lobunikazi lika-Eli Whitney i-$ 50,000 kodwa lilibale ukulihlawula. Amaqabane ahlele ukuba athengise amalungelo e-patent eNyakatho Carolina naseTennessee. Ngelo xesha iinkundla zaseGeorgia zaziqonda iimpazamo ezenziwe ku-Eli Whitney, kuphela unyaka omnye welungelo lakhe lomenzi. Ngo-1808 kwaye kwakhona ngo-1812 wancenga ngokuthobeka iCongress ngokuvuselela ilungelo lakhe lobunikazi.
Eli Whitney - Ezinye izixhobo
Ngomnyaka we-1798, u-Eli Whitney wasungula indlela yokwenza ama-muskets ngomshini ukwenzela ukuba iinxalenye zitshintshe. Okumangalisayo kukuba, kwakunjengomvelisi wama-muskets ekugqibeleni uWhitney waba ngutyebi.
I-cotton gin iyisisombululo sokususa imbewu kwi-cotton fiber. Izixhobo ezilula kule njongo ziye zadlulayo kangangamakhulu eminyaka, umatshini waseMpuma waseNdiya obizwa ngokuba yi-charka wasetyenziselwa ukwahlula imbewu kwi-lint xa i-fiber ithathelwa kwiisethi ze-rollers. I-charka yenzelwe ukusebenza kunye nekotoni ende, kodwa ikotoni yaseMerika yikotoni efutshane. I-coworker e-Colonial America isuswe ngesandla, ngokuqhelekileyo ngumsebenzi wamakhoboka.
Cotton Gin ye-Eli Whitney
Umshini kaEli Whitney ngowokuqala ukuhlambulula ikotoni encinane. Injini yakhe yekotoni yayinamazinyo aphezukileyo aphakame kwi-cylinder ejikelezayo enebhokisi leyo, xa eguqulwa yintonga, yatshintsha i-fiber yefotoni ngokuvuleka okuncinciweyo ukuze ihlukanise imbewu kwi-bint - i-brush ejikelezayo, isebenza ngebhanti kunye namapulisi , isuse i-lint fibrous kwi-spikes ebonakalayo.
Emva koko ama-gins athatywe ngamahashe kunye namanzi aphethwe ngamanzi kunye nekotoni yokuveliswa kwenyuka, kunye neendleko eziphantsi. Ikhokotshane yaba yinto yokuqala yokuthengisa iimpahla.
Ukufuna Ukukhula kweCotton
Emva kokuveliswa kwekotoni ye-cotton, isivuno sekhotoni eluhlaza saphindwa kabini emva kwe-1800 emva kwe-1800. Ukufunwa kwagqitywa ngamanye amanyathelo e- Industrial Revolution , afana noomatshini ukuza ukulukhupha kunye nokuwususa kunye ne-steamboat ukuyithutha. Kwiminyaka ye-nkulungwane yeMelika yayikhula iikota ezintathu zehlabathi ngekotoni, ininzi yayo yathunyelwa eNgilani okanye eNew England apho yenziwe yenziwe ngendwangu.
Ngethuba lo kugwaba lube luxabiseke, irayisi yokuthumela ngaphandle ihlala ihlala ihlale ihlale ihlala, kwaye iswekile yaqala ukukhula, kodwa kuphela eLouanaana. Ephakathi kwekhulu leminyaka uMzantsi wabonelela ngokuthengiswa kwamanye amahlanu eMelika, ubuninzi bawo kwipotton.
Iimveliso zeCotton zanamhlanje
Ngoku kutshanje iifowuni zokususa udoti, ukomisa, ukunyusa, ukucoca, ukucoca, nokucoca kwi-218 kg (ii-480-lb) izikhwebu sele zongezwe kwii-cotton gins zamanje.
Ukusetyenziswa kwamandla kagesi kunye nokukhangela umoya okanye ukusetyenziswa kwamanzi, izixhobo ezinokuzenzekelayo zivelise iitoni ezili-14 (i-15 toni zase-US) zokucoca ukotoni ngeyure.
I-First Historical Hobby neeKompyutha zeKhaya
UDavid Mamet U-Two-Person Play, 'Oleanna'
I-PHP Script ukuze ulayishe umfanekiso kunye nokubhala kwi-MySQL
ULynn-Holly Johnson: Umzobo weStater kunye noMdlali weNkcazo oye waxutywa kwi-Ice Castles
Ngubani ofumana iNgongoma Xa Ibhola likhangela kwi-Table yePing-Pong Table?